Hiiraan Online News About Somalia » Nin sheegtay Nebinnimo oo Jirdil iyo xabsi ku danbeeyay, Markii uu ku fashilmay soo nooleynta Qof dhintay
Nin sheegtay Nebinnimo oo Jirdil iyo xabsi ku danbeeyay, Markii uu ku fashilmay soo nooleynta Qof dhintay
Xaalad lama filaan ah ayaa qabsatay nin Kirishtaan ah oo dalka Itoobiya magaalo ku taallo ka sheegtay inuu yahay Nebi, markii uu ku fashilmay inuu soo nooleeyo qof dhintay sida uu sheegtay, kadibna si xun loo dilay oo haddana xabsi la dhigay.
Sheekadan ayaa ka dhacday degmada Limu ee galbeedka Itoobiya, halkaasoo uu ku dhintay Nin la yirahdo Belay Biftu Isniinti lasoo dhaafay, markii uu shil galay. Laakiin Qoyski ninka dhintay oo tacsi u fadhiya ayaa waxaa goobtii tacsida ka kacay nin sheegtay inuu Nebi yahay oo uu soo Nooleynayo ninka afar maalmood ka hor dhintay.
marki reerki Belay uu ka dhaadhiciyey inuu wiilkooda soo kicinayo waxaa la wada aaday qabuuraha dadka diinta kirishtanka aaminsan lagu aaso oo uu ninka ku aasnaaa. Ninkan nabinimada sheeganayo oo lagu magacaabo Geta Yawqal wuxuu amar ku bixiyey in qabriga Balay lagu aasay la soo faago si uu howshiisa uu u wato.
Meydka marka la soo saaray ayuu marar badan ku dhawaaqay “Belay Kac” isaga oo sanduuqa uu meydka ku jira marna ku seexanayey marna ku foorarsanayey.
Ugu dambeynti, ninki nabinimada sheeganayey ee lahaa waxbaan soo nooleyn wuu daalay sida uu u qeylinayey aakhirkina wuxuu yiri “waxba lama sameyn karo”, markiba wuxuu isku dayay inuu goobti ka dhaqaaqo waxaase ninkan waxa uu sameeynayey si weyn uga war sugayey qoyska ninka dhintay gacan qaad ayaana halki ka dhacay
Markiba goobti waxaa yimid boolis warka la gaarsiiyey ninki beenaalaha ahaa oosida loo garaacayey in la dilo qarka u saaraan ayay ka soo gaareen, Booliska degmada limu ayaana ninki hadda gacanta ku haya.